नागरिकको मतलाई खरिदबिक्रीको साधन जस्तो नबनाउन आयोगको आग्रह - Marganugami Daily
Marganugami Daily Breaking Headline1 National नागरिकको मतलाई खरिदबिक्रीको साधन जस्तो नबनाउन आयोगको आग्रह
नागरिकको मतलाई खरिदबिक्रीको साधन जस्तो नबनाउन आयोगको आग्रह
काठमाडौं, २१ कार्तिक । निर्वाचन आयोगले मंसिर १० र २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य चुनावमा मतदान तथा मतगणनामा खटिने कर्मचारीलाई क्षेत्रीयस्तरमा प्रशिक्षण दिने कार्यक्रम सुरु गरेको छ । क्षेत्रीयस्तरमा प्रशिक्षण लिएका प्रशिक्षकले जिल्ला जिल्लामा गएर त्यस जिल्लामा खटिने मतदान अधिकृत तथा सहायक मतदान अधिकृतलाई प्रशिक्षण दिने आयोगले जनाएको छ ।
काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको धुलिखेलमा मंगलबार भएको ‘मतदान तथा मतगणना क्षेत्रीय प्रशिक्षण’ कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले नागरिकको अमूल्य मतलाई खरिदबिक्री तथा वस्तु विनिमयको साधन जस्तो नबनाउन राजनीतिक दलहरुसँग आग्रह गर्नुभयो । नागरिकको मत लोकतन्त्रको आधार भएकाले मतको सुरक्षा गर्नु सबैको दायित्व हो भन्नुहुँदै प्रमुख आयुक्त यादवले नागरिकको मतलाई मतदान केन्द्रबाट मतगणनासम्मको प्रक्रिया पूरा गर्दासम्म सुरक्षित राख्न सबैको सहयोग आवश्यक रहेको बताए ।
टे«ड युनियनको दबाबमा चुनावमा कसैलाई पनि नखटाउन मुख्य निर्वाचन अधिकृत, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला निर्वाचन अधिकारीलाई निर्देशन दिनु हुँदै डा. यादवले निर्वाचनमा गलत कार्य गर्ने जो सुकैलाई पनि नछाड्ने बताए । शहर बजार र सार्वजनिक स्थल फोहोर नगर्न उम्मेदवारहरूलाई आग्रह गर्दै उनले सुरक्षाकर्मीहरुलाई पनि टुलुटुलु हेरेर नबस्न निर्देशन दिए । प्रमुख आयुक्त यादवले चुनावमा खटिने कर्मचारीहरुलाई कामप्रतिको प्रतिबद्धता, विश्वास र निरन्तरताका लागि मतदान र मतगणना प्रशिक्षण राखिएको बताए ।
आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता नवराज ढकालले तोकिएको समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु राष्ट्रिय दायित्व, संकल्प र लक्ष्य भएकाले निर्वाचन अभियानलाई सफल पार्न सबैको सहयोग आवश्यक रहेको बताए ।